Duomo nke Florence | Akụkọ Njem
Maria | | Getaways Europe, Italia
Otu n’ime ụlọ arụsị ndị kacha ibu na Krisendọm bụ Katidral Florence, nke ọtụtụ ndị na-akpọ Duomo. N'ezie, ị hụla ya n'ọtụtụ foto na ntuziaka njem dịka ọ bụ ihe nnọchianya nke obodo Italiantali a na facade ya pụrụ iche na nnukwu dome enweghị mgbagha. Agbanyeghị, ọ nweghị ihe a ga-eji tụnyere ahụmịhe nke ịhụ ya na mmadụ na ijegharị n'ime na gburugburu ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere Duomo nke Florence, anyị na-akwado ka ị nọgide na-agụ n'ihi na na post na-esote anyị ga-ekwu n'ụzọ zuru ezu banyere otu n'ime ọrụ ebube nke Gothic art na nke mbụ Rtali Renaissance. Sonyere anyị!
1 Mmalite nke Duomo nke Florence
2 Akụkụ nke Duomo nke Florence
3 Ime nke Duomo
4 Gbagogo na dome
5 Gburugburu Duomo nke Florence
Mmalite nke Duomo nke Florence
Iwu nke Katidral nke Santa María del Fiore malitere na 1296 na ụlọ nsọ ochie a raara nye Santa Reparata, nke pere mpe nke na agaghị anabata ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'obodo na-eto eto. Ọrụ ndị ahụ malitere n'okpuru nduzi nke Arnolfo di Cambio na mgbe ọ nwụsịrị, Guild of Wool Art nke na-ahụ maka ịchịkwa ọrụ ndị ahụ goro Giotto, onye bụ isi na-elekọta ụlọ elu ahụ, ma mesịa Francesco Talenti.
N’afọ 1380, e wuchara elu ụlọ atọ ahụ na atọ a rụchara arụ. Ugbua na narị afọ nke XNUMX, owuwu nke dome malitere n'okpuru iwu nke Filippo Brunelleschi, onye mbụ na-ese ụkpụrụ ụlọ Renaissance, bụ onye nwere nsogbu nke teknụzụ ebe ọ bụ na oke ibu nke dome enweghị ike ịkwado ụlọ ọdịnala nke ha ji arụ ọrụ n'oge ahụ. ... Mgbe ọtụtụ afọ nke ọmụmụ ihe gasịrị, ọ chepụtara ụzọ ọhụrụ nke rụpụtara nzụkọ abụọ na-akwado onwe ya.
The ime mma nke dome nke Florence Katidral rụrụ site Giorgio Vasari na Federico Zuccari na ihe nkiri na-anọchi anya Ikpeazụ Ikpe.
Akụkụ nke Duomo nke Florence
Katidral nke Santa Maria del Fiore ma ọ bụ Duomo bụ ụka nke anọ kachasị na mbara ala karịa Saint Peter na Rome, Saint Paul na London na Katidral Milan. Ọ dị mita 160 n’ogologo, mita 43 n’obosara na mita 90 n’ogologo ya. Elu nke elu nke ebube dome dị mita 100 na mita 45,5 na mpụta dayameta.
Ime nke Duomo
Site na atụmatụ obe nke Latin na akwara atọ nke ogidi atọ kwadoro, a na-ahụ Duomo ahụ na ịdị nwayọ ya ma nwee nnukwu mmetụta nke enweghị ohere gbasara ohere. Dika ejiri ego ndi mmadu mejuputa katidral a, ufodu ihe omuma a na ulo uka a raara nye ndi mmadu a ma ama na ndi isi agha nke Florence.
A na-egosipụta imirikiti ihe ịchọ mma dịka ihe ọkpụkpụ ma ọ bụ mbido okpukpe mbụ na Opera del Duomo Museum maka ebumnuche nchekwa. ya mere edochiri ha na Katidral, Battistero na Campanile. N’ebe ngosi ihe ngosi nka nka a na egosi nkowa na atumatu nke owuwu Santa Maria di Fiore.
N'ime Duomo anaghị enye ya ohere ịga leta ụlọ ekpere mana n'akụkụ ọnụ ụzọ enwere ohere ị ga-agbadata obere crypt achọpụtara n'etiti narị afọ nke XNUMX ebe ị nwere ike ịhụ ili nke Brunelleschm, onye edemede nke ama dome nke ụlọ nsọ ahụ na ọtụtụ ihe oyiyi eji achọ mma. Akwa ukpono, ebe ọ bụ na n'oge ahụ, ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ abụghị ndị e liri na crypts.
Gbagogo na dome
Brịgoro na dome nke Duomo bụ ahụmịhe. Havekwesịrị ịdị njikere nke uche iji gbagoro ihe karịrị 450 nzọụkwụ nke ụdị na ụdị dị iche iche na-ekewa echiche na n'okporo ámá. Ọ ga-adị mkpa ịnwe mmụọ mmụọ adventurous ebe ọ bụ na a na-eme ka ngalaba ikpeazụ bụrụ ihe kwụ ọtọ n'etiti mputa na mpụga ime ụlọ.
Agbanyeghị, ndị chọrọ ịtụgharị uche na mbara igwe nke Florence n'ụzọ dị jụụ nwere ike ịga Giotto's Campanile. Nhọrọ abụọ dị mma maka ịnụ ụtọ nka na ụdị ya dị ọcha na echiche dị egwu.
Gburugburu Duomo nke Florence
Na akụkọ ihe mere eme center nke Florence, karịsịa na mpaghara gburugburu Duomo, e nwere otutu ngosi ihe mgbe ochie na ịnakọta sook elu nke kacha mma art na obodo.
Obere oge ije si Duomo bụ Bargello Museum. Ọrụ ndị Michelangelo, Donatello na Verrocchio bi ebe a, ọ bụ ezie na e nwekwara mkpokọta nka Islam na ngwa agha.
N'okpuru Katidral Florence bụ Opera del Duomo Museum nwere nchịkọta dị mkpa nke ọrụ Donatello yana mpempe ndị ọzọ bara uru sitere na Duomo, Baptistery na Giotto's Campanile.
Iji mụta banyere nkà mmụta ihe banyere mmadụ, anyị nwere ike ịga na National Museum nke Anthropology na Ethnology na Non Finito Palace site na del Proconsolo.
Ebe ndị ọzọ nwere mmasị na obodo ahụ bụ Palazzo Vecchio na Piazza della Signoria. N’akuku ụlọ a ka Uffizi Gallery dị, otu n’ime ebe ọdịbendị a kacha eleta na Florence, na-echekwa ihe osise ndị dị mkpa dị ka ọmụmụ nke Venus nke Botticelli ma ọ bụ ofufe nke Magi site n’aka Leonardo da Vinci.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Italia » Duomo nke Florence
Isla Canela na Huelva